Manish Karki – osnepal tv
घरबाहल छुट मात्रै हैन् रासनको व्यवस्था पनि गर्दैछन् देवतारुपी घरबेटी ! ५००० माक्स वितरण गर्ने(भिडियो)
नेपालमै बन्यो कोरोनाको औषधी ? म नेपालीहरुलाई बचाउन कोरोनाको औषधी फ्रिमा दिन्छु(भिडियो)
आंचलको बिहेसंगै आंप जोडीको ब्रेकअप ?(भिडियोमा हेर्नुस्)
एक समयका मिल्ने साथी यतिबेला छुटेका छन् । यहां कुरा गर्दैछौं अभिनेता पल शाह र अभिनेत्री आंचल शर्माको । नाईं नभन्नू ल ४’ बाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा भित्रिएका पल र आंचलको जोडी अब सादाका लागि टुटेको छ, सायद । प्रेमी उदित श्रेष्ठसंग बिवाह गरेपछि आंचल नयां जीवनको शुरुवात गर्दैछिन् । यता पल शाहसंगको सम्बन्ध भने […] More
March 14, 2020, 12:31 pm
सोनिकाले पारस सरकारसंगको सम्बन्धबारे यस्तो भनिन्? डायमण्ड रिङबारे खोलिन राज(भिडियो)
सामाजिक संजालमा मात्र हैन राजनीति वृत्तमा समेत पूर्वयुवराज पारस शाह र मोडल सोनिका रोकायाको चर्चा मज्जैले हुने गरेको छ । बेला बखत सार्वजनिक हुने गरेका फेसबुक र टिकटक भिडियोमा उनीहरुको सामिप्यता राम्रै देखिन्छ । दरबार मार्गमा रेष्टुरेन्ट खोलेकी सोनिकाले हालै राजधानीको सिनामंगलमा ब्युटिपर्लर खोलेकी छिन् । जहां पूर्वयुवराज पासर ढिला गरी पुगे । त्यहां पनि […] More
March 11, 2020, 2:50 pm
कमेडी च्याम्पियन खबपुले जित्ने रोल्पेली दाईको ठोकुवा ? गाए यस्तो कडा दोहोरी(भिडियो हेर्नुस)
यतिबेला भाईरल भैईदिन खासै केही पनि चाहीदैन् । केही फरक प्रतिभा भाईरल छन् सामाजिक संजालमा । कोहीमा चांही उत्कृष्ट प्रतिभा पनि हुने गर्छन् । यतिबेला यस्तै उत्कृष्ट प्रतिभा भएका एक व्यक्ती सामाजिक संजालमा भाईरल भैइरहेका छन् । तर, जसलाई रोल्पेली दाईको उपमा दिईएको छ । रोल्पाबाटै यतिबेला कमेडी च्याम्पियन जित्ने होडमा छटन् खबपु अर्थात् खड्ग […] More
March 7, 2020, 1:29 pm
in Ent., Video
इन्द्रेणीमा पशुपति शर्मा र आयुषाको दोहोरी घम्साघम्सी ! पशुपति भन्दा आयुषा दोहोरीमा कडा ?(भिडियो)
यतिबेला एकपछि अर्को गर्दै भा*ईरल गायक गायिकाहरु आउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । जसको प्रस्फुटन गर्दछ, लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणीले । इन्द्रेणी भित्रका कलाकारहरुको एक से एक प्रतिभा दर्शकले लामो समयदेखि हेर्दै आएका छन् । यसबिचमा काभ्रेकी ८ वर्षिय बालिका इन्द्रेणी मार्mत यतिबेला भा*ईरल छिन् । हालै उनले चर्चित गायक पशुपति शर्मासंग दोहोरीमा भिडण्त गरेकी छिन् […] More
March 1, 2020, 1:48 pm
अनमोल सम्पर्कमा नआए जेल जाल्ने तयारी ? ५ लाख ठगी काण्डको भित्री रहस्य यस्तो(भिडियोमा हेर्नुस् )
नेपाली फिल्म क्षेत्रका चर्चित अभिनेता अनमोल केसीमाथी ठूलो आरोप लागेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उनीविरुद्ध ठगी गरेको अभियोगमा उजुरी परेको हो । फिलिम्स नेपाल, जयन श्रेष्ठ इन्टरटेटमेन्ट प्रालिबाट निर्माण हुन लागेको फिल्म धूपौरेमा खेल्न सहमति गरी ५ लाख एडभान्स समेत लिएपनि उनले नखेलेर ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको हो । फिल्मका निर्माता […] More
February 29, 2020, 12:21 pm
विष्णु माझीले २ लाख पारिश्रमिक लिनुको भित्रि कारण ?(भिडियोमा हेर्नुस्)
विष्णु माझीको स्वरमा सजिएको यो गीत युट्युबबाट अहिलेसम्म साढे ५ करोडले हेरिसकेका छन् । लालुमाईमा उनै विष्णु माझी र सन्दीप न्यौपानेको स्वर छ । सो गीतलाई युट्युबमा खोज्नेको संख्या २ करोड ६५ लाखभन्दा बढी देखिन्छ । छिपछिपे पानीमा लेऊ बोलको गीतमा समेत उनै विष्णुको स्वर छ । यो गीतलाई झण्डै ७८ लाखले हेरिसकेका छन् । […] More
February 29, 2020, 11:53 am
प्रहरीको कु*टाई खाएकी हेमा भन्छिन् जुर्नेलले ज्या,न लिन खोज्यो ? जिउभरी निलडाम (भिडियो)
महानगरीय प्रहरी प्रभाग, भैंसेपाटीका प्रहरी निरीक्षक देवीप्रसाद पौडेलमाथि प्रहरीले आन्तरिक छानविन सुरु गरेको छ । नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी हेम खत्रीको घर घेर्ने टोलीमा सहभागी हिमा श्रेष्ठलाई ला’ठि हा’नेपछि इन्सपेक्टर पौडेलमाथि छानविन सुरु भएको हो । निर्देशनपछि ललितपुर प्रहरीले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति बनाएको छ । समितिलाई […] More
February 28, 2020, 3:07 pm
पल शाहले बर्थ डेमा यति ठूलो सहयोग गरे, बाल बालिका भेट्दा भा*वु*क पल (भिडियो)
पछील्लो समय नायक नायिकाको फ्यानहरुले आ आफ्नो मन पर्ने नायक नायिकाको फ्यान ग्रुप सामाजिक संजालमा खोल्न थालेका छन् । यस्तैमा नायक पल शाहको पनि छुट्टै फ्यान ग्रुप छ । उक्त ग्रुपको नाम हो ‘पल शाह फ्यान क्लब’ । त्यहाँ आबद्ध भएका पलका फ्‍यानहरुले केही समय अगाडिदेखि नै पललाई जन्मदिन मनाउदै आएका छन् । अहिले कलाकार […] More
February 28, 2020, 9:03 am
रबी लामिछाने देखि ऋचा शर्मालाई रुवाउंने फिल्म आमाको भिडियो रिभ्यु मन थामेर हेुर्नस्
नेपालमा यतिबेला फरक शैलीमा फिल्महरु निर्माण भैईरहेका छन् । जसले दर्शकका नयां नयां टेष्टलाई पनि पर्दाम उतारि रहेका छन् । केही समय अघि सम्म नेपाली सिनेमामाथि आरोप छ, यिनमा नेपाली समाज र यथार्थ भेटिन्न । यो आरोप धेरैजसो सिनेमाको हकमा सही पनि हो । नेपाली सिनेमाका कथा यथार्थसँग भन्दा पनि स्वैरकल्पनासँग नजिक छन् । ती […] More
February 28, 2020, 8:56 am
पल शाह पूजा र आंचल बारे यसो भन्छन् ? बिहेको निम्तो आउंने आशाबादी पल(भिडियोे)
अभिनेता पल शाह यतिबेला फिल्म म यस्तो गीत गाउछुको प्रोमोसनमा ब्यस्त छन् । अभिनेत्री पूजा शर्मासंग स्क्रीन शेयर गरेका पलले हालै आफ्नो जन्मदिन असाहय बाल बालिकाहरुसंग मनाए । ज उनले ठूलो आर्थिक सहयोग पनि गरेका थिए । पल नेपाली फिल्मका चल्तीका अभिनेता हुन् । फिल्ममा मात्र हैन पल म्युजिक भिडियोहरुमा पनि उस्तै लोकप्रिय र व्यस्त […] More
आफुलाई चरम यातना दिएर पिट्दापनी साथी बचाउन यस्तो सम्म झुट बोलिन् दमककी युबतिले (भिडियो)
सामाजिक संजाल फेसबुकमा ७ जना युवती मिलेर १ जना युवतीलाई कुटेको लाइभ भिडियो धेरै भाइरल भएको थियो । झापा दमकका युवतीको फाइटको भिडियो देखेर सबैले यो बिषयमा धेरै उत्सुकता गर्नुभएको थियो । युवती बीच के कारणले यस्तो झगडा पर्यो त ? उनीहरु बीच भएको यो झगडा आखिर कसरि भयो ? को को थिए त यो […] More
February 11, 2020, 5:53 am
पैसा पठाउने जयन्ती राई पहिलो पटक मिडियामा, पुण्यको खुल्यो यस्तो र*हष्य (भिडियो)
सामाजिक कार्यमा अग्रसर दुई अभियन्ता पुण्य गौतम र बिनयजंग बस्नेतबीच दर्जन बढी युट्युव च्यालन र केही अनलाइनका पत्रकारहरुसँग आफ्नो कुरा राखिरहेका बेला चर्का चर्की पर्यो र पुण्य गौतम ढलेका थिए। एक जना बालकको उपचारका लागि भन्दै सहयोग जुटाउँदै हिडेका उनलाई सोही १५ हजार सहयोग रकम हिनामिना भएको आरोप लागेपछि त्यसवारे स्पष्टिकरण दिन उनी मिडियामा आएका […] More
February 11, 2020, 5:27 am